डेट जाँदा बिल तिर्ने कसले ?
बिहीबार, १३ फागुन, २०७७
युभेन्टससँग सम्झौता लम्ब्याउँदै रोनाल्डो
नायक पल शाहविरुद्ध धरानमा उजुरी, कुटपिट गरेको आरोप
मारवाडी प्रिमियर लिग : प्रिमियर ११, महालक्ष्मी ११ र सोनी रोयल्स विजयी
काङ्ग्रेस संसदमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छ : निधि
मुद्दा कमजोर बनाउन घुसको बार्गेनिङ, रङ्गेहात पक्राउ परे औषधि व्यवस्था विभागका अधिकृत (भिडियो)
एफआई प्रविधिसहित बजाजको नयाँ तीन पाङ्ग्रे अटो बजारमा
दिनभरिका खबर फटाफट – १३ फाल्गुन , २०७७
विराटनगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको सरुवा, सहसचिव बस्नेत आउने
बजार अनुगमनमा महानगरपालिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आग्रह
मुख्य पृष्ठसम्बन्ध स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीडेट जाँदा बिल तिर्ने कसले ?
मङ्गलबार, २२ पुस, २०७६ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, २२ पुस । आजकल प्रेममा पर्ने अधिकाशं जोडीहरू डेटिङ जाने गर्छन् । सामान्य भेटघाटलाई डेटिङको नाममा परिवर्तन भएपछि डेटिङमा गरिएको खानपान तथा खर्चको बिल प्रायः पुरुषले नै तिर्ने गरेका हुन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा डेटिङमा खर्च भएको बिल पुरुषले नै तिर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएपनि कसैको रोजगारमा बढी पुरुष भएकोले प्रेमिकासँग पैसा नहुने कारणले पुरुषहरूले बील गरेका हुन्छन् । तर, बिल कसले तिर्नुपर्छ ?
अहिले समाजमा महिला र पुरुष बराबर छन् भन्ने सोचको विकास भइरहेको बेला डेटिङमा सकेसम्म दुवैजनाले बिल तिर्नु उपयुक्त मानिन्छ । डेट गरेको हरेक खर्चको आधाआधा गर्नुभन्दा पनि एक पटकको कुनै एक (प्रेमी अथवा प्रेमिका)ले बिल तिर्ने राम्रो मानिन्छ । यस्तो गर्दा डेटमा कोही एक जनाको मात्र खर्च हुँदैन । साथै, पैसा तिरेका कारण कुनै स्वार्थपूर्ति गर्नबाट समेत बचाउन सक्छ ।
तर, पैसा तिर्ने पर्छ भन्दैमा जागिर नभएको वा पैसा नभएको अवस्थामा बिल तिर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । जोसँग पैसा छ उसैले बिल तिर्दा हुन्छ । यसो गर्दा माया र सम्मान बराबर हुने गर्छ । कतिपय प्रेमिकाहरू डेटमा गएको बेला प्रायः आफ्ना प्रेमीलाई खर्च गराउन लगाउँछन् । डेटमा खर्च गराउनुका साथै सपिङ र आफ्नो मन परेको सामानहरू किन्न लगाउँछन् ।
तर, प्रेमिकाहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसो गर्दा पुरुषलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै आफ्नो प्रेमिकाप्रतिको भावना पनि नकारात्मक बनेर जान सक्छ । पुरुषले यस्तो प्रकारको खर्च गरेपछि त्यसबाटै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रेमिकालाई विभिन्न खालको दवावसमेत दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले डेटमा रहेको बेला प्रेमीको चाहाना बाहिर गएर कुनै वस्तु खरिदका लागि दवाव दिनु राम्रो हुँदैन ।
उत्कृष्ट सम्बन्धका लागि प्रेमी–प्रेमिकाको आत्मीयता र भावना मिल्नु महत्त्वपूर्ण हो । त्यसकारण महिलाहरूले आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू आफैँ किन्नु उत्तम हुन्छ, यसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन पनि सिकाउँछ । त्यसैले डेटमा जादाँ आएको बिल प्रेमी र प्रेमिकाले पालै पालो वा मिलेर तिर्नु पर्छ ।
मस्तिष्कको क्षमता बढाउन परीक्षाको समयमा के खाने, के नखाने ?
कोभडले निम्त्याउन सक्छन् यी दीर्घकालीन जटिलता
राति सुत्दा बत्ती बालेर सुत्नु शरीरका लागि हानिकारक